N'Golo Kante Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France N'Golo Kante Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị N'Golo Kante Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Ndụ, Ndụ, Nettọ na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ ndụ Kante. Lifebogger na -egosi eziokwu dị iche iche site na mgbe ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
N'Golo Kante Akụkọ nwata:
Nne na nna Ngolo Kante si Mali (West Africa) kwaga France ịga chọọ ahịhịa ndụ na France.
A mụrụ N'golo Kante dị ka nwa mbụ nke ụmụnne nwoke na ụmụnna nwanyị anọ. Papa ya nwụrụ mgbe ọ dị obere. Site na nwata, echiche nke ibu ọrụ dakwasịrị ya.
Ọnwụ nna ya hapụrụ nne Ngolo Kante (nke dị n'okpuru) na nnukwu ibu ọrụ ịzụ nwa.
Zute Nne N'Golo Kante.
Na mbido, Kante maara uru ịrụsi ọrụ ike n'ihi na ọ hụrụ na dịka naanị ụzọ ọ ga -esi nweta ihe na ndụ.
N'Golo Kante's Biography - Tozọ Na-arụ Ọrụ Nlekọta Football:
Ọ bụ ezie na iko ụwa 1998 na -aga n'ihu maka ebube France, Kante nwere ọganihu n'ụzọ ego site n'inwetakwu ego ịnakọta ahịhịa nke ndị na -agba bọọlụ tụfuru n'ofe ámá egwuregwu.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke ndị Fans na-elele 1998 World cup na France. Oge a bụ oge Kante mere ego site na ịtụtụ na ire ere site n'aka ndị fan.
Mgbe France 98 World Cup, Kante hụrụ France dị iche. Ọ hụrụ mba juru eju nke ebube bọọlụ ya na ọdịnihu ya dị n'ubu ndị na-akwaga mba ọzọ.
James Maddison Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Nke a bụ oge ọ matara aha ndị si mba ọzọ na -akwaga mba ọzọ bụ ndị nyeere France aka inweta iko ụwa nke 1998 FIFA.
Kante hụrụ ọdịnihu maka onwe ya na football mgbe ọ hụrụ ka France buliri iko ụwa na 1998.
Igwe kpakpando mara oke ama bu ndi egwuregwu dika Thierry Henry, Zidine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram, na Nicolas Anelka.
Akụkọ ndụ N'Golo Kante - Afọ ndị mbụ na football ọrụ:
N'oge na -adịghị anya, ọchịchọ ya ghọrọ eziokwu ka ọ malitere ọrụ ya na JS Suresnes na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Paris.
Echere m na ị nwere ike ịhụ Ngolo Kante n'etiti ndị na-eto eto. Naanị hụ ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile na-ele ya anya.
Mgbe ndebanye aha ya na klọb ahụ, ndị otu egwuregwu kụrụ Kante aha ya dị ka onye na -eto eto kacha dị obere ma lekwasị anya na klọb ahụ.
Na mbụ, obere ogologo ya na anya mere ka ọtụtụ ndị otu ya na -eche ebe o siri bịa ma ọ ga -anọ ogologo oge na pitch.
Ná mmalite nke ọrụ ya, Kante gosipụtara àgwà ndị gosipụtara mmalite ịdị umeala n'obi ya. Dị ka onye na -enyere aka na Kante Pierre Ville si kwuo;
“Kanté nọrọ n'èzí n'azụ egwuregwu nke nnukwu ìgwè n'ihi na ọ dị obere. N'oge ahụ, ọ ga-eme mkpọtụ ụbọchị niile, were bọọlụ ahụ site na nsọtụ otu olulu ahụ ma buru ya gaa n'ogologo ọzọ nke ubi ahụ. Nke ahụ bụ usoro ọzụzụ nke onwe ya nke onye na-akụzighị. ”
N'Golo Kante's Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ bụ ịdị umeala n'obi na ịrụsi ọrụ ike nke nwata na-echegbu onwe ya bụ nke nyeere obere onye na-eto eto aka na-eto eto n'oge ntorobịa ya.
Otu n'ime pals ochie nke Kante Francois Lemoine kwukwara na;
"Kante bụ 3 dị obere karịa anyị ma ọ na-egwuri egwu na anyị. Anyị na-egwuri egwu megide otu ndị otu obodo wee bịa na minit iri site na njedebe. Ọ dị obere karịa mmadụ ọ bụla ma ọ dịghị onye nwere ike ịgafe ya.
N'ọgwụgwụ nke egwuregwu ahụ, anyị banyere n'ime ụlọ na-agbanwe agbanwe, elere m otu n'ime ndị òtù m anya, m wee sị ya, 'Lee, ọ dị obere karịa anyị ma n'ime nkeji iri o gosi anyị otu esi eme ya'. Ọ bụ ezigbo ihe dị umeala n'obi. "
Ọ bụ mmetụta Kante nke mere ka ndị otu ya nwee ike imeri trophies. Ị maara?… Mgbe ndị otu egwuregwu ya na -eme ememme, a ga -ahapụ Kante n'ihi na amaara ya na ọ bụ onye ihere.
Ọ bụ onye ga -achọ ile ememme anya site n'ebe dị anya.
Ya mere ịdị umeala n'obi site na nwata. Kante nyeere ha aka imeri iko MA zere ya mgbe ndị otu ya na -eme ememme. Ọ bụ onye kacha nta n'etiti ụmụaka buru ibu.
Ọbụlagodi ka oge gafere, Kante nọgidere na -eto eto mana a na -ahụta ya dị ka ike (obere ma dị ike) nke ga -ekpuchi ahịhịa niile n'ọhịa.
Obere ogo ya yiri ka ọ dị ka obere nwa nleta na -ele ya anya na foto dị n'okpuru.
Obere ma dị ike bụ aha otutu ya n'oge ọ bụ nwata. Nwatakịrị nọ n'akụkụ aka nri na -ele anya na -ama jijiji na obere nwa na -enyere ndị otu ya aka imeri iko.
N'Golo Kante malitere itolite mgbe ọ nọrọ ihe dị ka afọ 4 na klọb. Nke a bụ oge omume ya na ụzọ ọrụ ya pụtara ìhè.
N'oge ụfọdụ, ewu ewu Kante hụrụ ya ka ọ bụrụ ohu klọb kachasị amasị na onye kwesịrị ntụkwasị obi. Onye nkuzi ntorobịa ya Voktyna otu nyere ya ọrụ ka ọ na -echeta;
"N'oge ahụ, Kante bụ onye ọkpụkpọ ga-ege ntị ma mee ihe niile achọrọ ya. N'ezie, ihe niile. Mụ na Kante na-egwuri egwu tupu ezumike. Agwara m N'Golo, ana m enye gị ọnwa abụọ ka ị jiri ụkwụ aka ekpe gị 50, 50 were ụkwụ aka nri gị na 50 were isi gị. Ọfiọn̄ iba ke ukperedem, enye ama anam oro! Akpata oyi wụrụ m. Site n'oge a, agwatụbeghị m ya ihe ọ ga-eme. Ahapụrụ m ya ka o kee ụwa ka o kpebie okwu ya ”
Oge ntorobịa Kante mechara nweta ya ọrụ ọbụna dịka onye ọkpụkpọ agụmakwụkwọ. O sonyeere ndi otu umuaka ndi ntorobia ndi hoputara weputara otutu oge iji zue umuaka.
Kante were ya n'ọrụ site na klọb ya iburu onye ndu n'agbanyeghị ịbụ onye ọkpụkpọ agụmakwụkwọ.
N'Golo Kante's Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Onye ọ bụla nabatara ọmarịcha arụmọrụ ya gụnyere onye nkuzi Boulogne Durand onye kwuru otu oge;
"Kante dị ukwuu, ọ na-egwu kpọmkwem, igbe-na-igbe na ebe o kpuchiri bụ ebe ahụ ka mmadụ niile hụ.
Ọ bụ na Boulogne ka nnukwu nkà ọ kpuchiri ya siiri ndị na-agụ akwụkwọ ike ileghara anya.
Ọrụ siri ike Kante dị ka onye ọkpụkpọ mere ka ọ kwaga England ka ya na Leicester soro. Mgbe ọ nọ na klọb, ọ nwetara otuto dị ukwuu maka ngosipụta ya na -atọkarị ụtọ.
E weere Kante dị ka isi ihe dị na klọb mara mma ka ha gara n'ihu merie 2015 - 16 Premier League.
Mkparịta ụka Kante na nkwụsị ya na -agbanwe agbanwe dọtara Chelsea FC onye nwetara ya na 2016. Ya na klọb ahụ, ọ gara n'ihu merie aha Premier League ọzọ.
A kpọkwara ya aha ndị otu PFA nke Afọ maka oge nke abụọ sochiri ya.
A hụrụ ọnụ ọgụgụ kacha elu nke Kante mgbe ọrụ ike ya mere ka ọ nweta iko iko mba ụwa 2018.
N'oge a, Kante hụrụ onwe ya ka ọ na -eitatingomi ndị dike 1998 World Cup mbụ ọ bụghị naanị merie iko ụwa mana kpaliri ya ka ọ bụrụ ndị egwuregwu.
N'ikwu okwu banyere mmeri nke World Cup, Kante na-atụgharị ya mgbe ọ na-eto eto. O kwuru otu oge TalkSport akụkọ;
Adị m afọ 7 mgbe France meriri ya maka mba ahụ na 1998 wee nwee obi a ,ụrị, agwara m ndị enyi m, sị: 'Otu ụbọchị, m ga-emeri ya.' ”
O doro anya na Kante gosipụtara na ụwa bụ nkwa ọzọ mara mma nke ọgbọ Africa-French ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Kedu onye bụ nwunye N'Golo Kante?
A maghị enyi nwanyị Kante n'oge ọ na-ede Bio.
However, there existed rumours that Ngolo Kante is dating Jude Littler, who is Djibril Cissé si nwunye-nwanyi. E mesịrị kwenye na ọ bụ onye eziokwu.
N'Golo Kante's Life Life:
Ịmata ndụ N'Golo Kante ga -enyere gị aka ịmata ya nke ọma.
Kante bụ nwoke dị umeala n'obi. Ọ bụ onye na -anaghị achọ ịmanye onwe ya ndị otu na ndị enyi ya, ọkachasị n'oge ememme.
N'oge mmemme French na iko mba ụwa 2018, N'Golo Kante bụ onye ihere nke ukwuu ijide iko iko mba ụwa mgbe France meriri Croatia.
"Ihere na-eme ya ikwu 'nke m ijide iko ahụ, n'ihi ya, ọ guzoro ma lee anya na trophy ahụ site n'ebe dị anya. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa n'ihu ya. N'oge ụfọdụ, onye ọ bụla were ya nye ya sị 'Bịa, Were Cup, ọ bụ nke gị'."
Kwuru Giroud. Ndị otu egwuregwu ya ga -anọrịrị n'akụkụ ka onye na -agba bọọlụ dị umeala n'obi wee jide iko ahụ.
Kante akụzila ụwa n'ezie na ihere abụghị ihe mgbochi na -aga nke ọma na ndụ.
Àgwà Ngolo Kante mere ka ọ hụ ya n'anya nke ukwuu. Ọ bụ otu n'ime kpakpando bọọlụ ole na ole nke na -esiri ndị ọkpọ ma ọ bụ ndị egwu Chelsea ike ịkpọ asị.
N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke Kante zutere onye na -akwado nwanyị Chelsea. Ebe E Si Nweta ChelseaTV.
N'Golo Kante Family Life:
Akụkọ banyere ezinụlọ N'Golo Kante na -egosi ịrị elu ịda ogbenye na akụnụba. Obi abụọ adịghị ya, Ngolo Kante sitere na mmalite dị umeala n'obi na mmalite ezinụlọ.
Onyinye ezinụlọ ya kpaliri ọtụtụ ndị na -azụ ma na -egwu ụkwụ efu na ọtụtụ ogige uzuzu uzuzu jupụtara na mgbọrọgwụ ezinụlọ ya dị n'Africa.
Site na Kante na-eto eto, ọ nweziri ike idozi nwanne ya nwanyị nke nta na usoro ntorobịa nke nwanyị na Suresnes, mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke Paris.
Zute ndị òtù ezinụlọ N'Golo Kante.
N'Golo Kante Ndụ Ndụ:
Dabere na onye ntaakụkọ BBC Sport, Paul Fletcher;
"Kante enweghị mmasị n'igosi akụ ya n'agbanyeghị ịnata £ 120,000 kwa izu"
N'Golo Kante's Fun Eziokwu:
Iji mechie N'Golo Kante akụkọ ndụ anyị, ebe a bụ ihe ọchị banyere midest maestro.
Eziokwu #tọ # 1 - Mkpuchi :wa:
E nwere ihe ngosi na mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-emesi ike na 71% nke ụwa kpuchiri mmiri ka ndị ọzọ kpuchiri N'Golo Kante.
Eziokwu na-atọ ọchị # 2 - Antonio Conte's ntutu:
Ndị na-agba bọlbụ football toro N'golo Kante dị ka onye ọrụ maka mmeri Antonio Conte si ntutu.
Eziokwu ọchị # 3 - Ezigbo Anya:
Ọ na-awụ ndị na-agba bọọlụ bọọlụ n'ahụ mgbe ha hụrụ oke egwu Kante na ezinaụlọ onye nkuzi ya. Nye ụfọdụ Fans, ọ dị ka ọ na-achọ itinye ihe niile n'ihe egwu site na ịbanye Antonio Conte si nwunye na nwa.
Eziokwu na-atọ ụtọ # 4 - argba Ọcha:
Ọnwa ole na ole mgbe 2018 World Cup tournament n'oge Social Media 10 afọ ihe ịma aka gburugburu, ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ nke Ngolo Kante na-ere shuga na n'elu internet nke tụnyere ya mmepe n'etiti afọ 2009 na 2019.
Ihe oyiyi a hapụrụ ụmụ agbọghọ ndị na-emetụ ya n'obi. Otú ọ dị, e mesịrị hụ onyinyo ahụ ka a na-ese foto.
Eziokwu ọchị # 5 - The Lucky Barber gọziri agọzi site Kante:
N'Golo Kante na-akpụ isi, Naji Nagy jụrụ ịhapụ ya na Kante mgbe ọ hapụrụ Leicester gaa Chelsea. N'igosi mmekọrịta dị n'etiti ya na Kante, Naji chetara ozugbo:
“Anọ m na-egbutu Kante ntutu kemgbe ọ bịara Leicester. Ọ ghọọla karịa ndị ahịa, ọ bụ enyi, karịa nke ahụ. Ọ na-ewute m na ọ kwagara Chelsea mana ọ na-enwe obi ụtọ na ọ na-ezitere m ego ka m gaa 130 kilomita iji bịa kpụọ ntutu ya.
Onye na-edozi isi na Leicester gosipụtara atụmatụ ya maka ọdịnihu na iji kwado mmekọrịta ha.
Echere m ịkwaga ezinụlọ m na London ma ghọọ onye na-edebanye aha Chelsea n'akwụkwọ maka ndị ahịa m niile. "
ka Naji Nagy nwere obi ụtọ.
Eziokwu ọchị # 5 - Nhọrọ maka Lassana Diarra na Makelele:
Akwụkwọ akụkọ mpaghara French La Voix du Nord liked Health Claude Makélélé n'oge mmalite ya na Nantes.
Nke a bụ n'ihi ụdị egwuregwu ha yiri. Mgbe ọ jụsịrị onye ọkpụkpọ ahụ ma ọ bụrụ na o weere Makélélé dị ka onye nlereanya ya, nzaghachi Kanté adịghị mma.
N'Golo Kante họpụtara Lassana Diarra kama Makélélé dị ka onye nlereanya. Mgbe ọ nụrụ nke a, Makélélé zara ya:
"Kanté kwesịrị ilekwasị anya n'ịgbalịsi ike ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ pụrụ iche na nduzi mana ọ bụghị naanị n'ike ya na ikike ịgba bọl."
Eziokwu na-atọ ọchị # 6 - Ihe kpatara aha ya:
N'Golo Kante nọ na 2016 utu aha “Ụdị”Site na ndị otu ya bụ Chelsea Teammate Eden Hazard maka ebumnuche ndị na-adịghị anya site na ikike nke ụzọ mgbochi mbụ na ikike ya iji weghachite bọl site n'aka ndị iro.
Nchịkọta vidiyo Ngolo Kante Biography:
Aha n'uju N'Golo Kante
Ụbọchị ọmụmụ Ụbọchị 29th nke March 1991
Age 29 (ka nke ọnwa Mee 2020)
Ndị nne na nna N / A
Nwanne N / A
elu 5 ụkwụ, 6 sentimita
ibu ibu 70kg
Egwuru egwu ọnọdụ N’agbata etiti.
Daalụ maka ịgụ akụkọ a nwere nghọta na akụkọ ndụ N'Golo Kante. At Lifebogger, anyị nwere nlebara anya anyị maka eziokwu na izi ezi n'inye akụkọ ụmụaka na akụkọ ndụ.
Ị hụla ihe na -adịghị mma n'isiokwu a? biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ okwu na igbe dị n'okpuru.
Na -eme ka m chọọ ịkwa ákwá.
Ngosipụta ihe nkiri dị oke egwu.
Excelente biografía! Dị ka ihe atụ na humildad. Realmente es una persona muy especial, que por su actuar anima a otros a mejorar su comportamiento y practicar las buenas obras y la solidaridad. Bendiciones para él y su familia!
Mazi Mandla Godfrey Ncongwane
Emeela N 'Galo Kante ị kwesịrị inweta ihe kachasị mma na ndụ gị na ihe masịrị m maka gị nwanne m nwoke, echefughị ​​ebe ị si bịa na ezinụlọ gị.
Jimoh ụbọchị ụka
Ọganiihu Kante nwere mmetụta mmụọ ma ana m ekele Chineke maka ndụ ya. Ọ bụ n'ezie ezigbo mmadụ
Kpamkpam ezigbo onyinye ọkpụkpọ, Ya mere, dị umeala n'obi hụrụ Ya n'anya
Ọ bụ akụkọ na-ezighị ezi Na akụkọ ọma